Ukuzibandakanya kwintengiso: Ukuzonwabisa ngeVidiyo | Martech Zone
Ukuzibandakanya kwintengiso: Ukuzonwabisa ngeVidiyo
NgoMvulo, Februwari 2, 2009 NgoLwesibini, Oktobha 6, 2020 Douglas Karr
Ukwakha iqonga lamashishini ukubhloga kuyo kuyimpumelelo kuphela ukuba abo bathengi baphakamisa iqonga. Siyazi ukuba abathengi bethu baya kuphumelela ekufumaneni imbuyiselo kutyalo-mali ukuba sinokubenza ukuba benze kwaye babelane ngezithuba ezininzi malunga neemveliso kunye neenkonzo zabo.
Ukusetyenziswa kweqonga kufuna ukuba isoftware njengenkampani yenkonzo ngokwenene ibe nesicwangciso sokuqinisekisa ukusetyenziswa kwayo. Ukusuka ebhodini ngokujonga ukusetyenziswa, iqonga kufuneka lijonge ukuqinisekisa ukuba usebenzisa iqonga ngokupheleleyo. Ilula kakhulu… ukusetyenziswa kukhokelela kwiziphumo, iziphumo zikhokelela kwimbuyekezo kutyalo-mali, kwaye imbuyekezo kutyalo-mali ikhokelela ekuhlaziyweni kwabathengi nakwandiswe.
Xa sabona ukudipha ekusebenziseni kwethu, saba nobuchule bokuza nephulo le-imeyile elibandakanya iividiyo ezingakhiwanga kakuhle kunye neevidiyo zokubamba umdla wabathengi bethu.
Ukuba uza kushiya ukuthobeka kwakho emnyango, ungathumela malunga nayo. Besisenza amaphulo okubandakanya kwakhona abaxhasi abanemveliso yokuqulatha umxholo owawusilela.
Sikhuphe zonke iindawo zokumisa kwaye sonwabile ngezinye iividiyo zabathengi bethu. Zirekhodwe kusetyenziswa i-iPhone, iMovie, kunye neengoma ezizenzekelayo. Sivelise zonke ngosuku kwaye sabatyhalela ngaphandle!
Vidiyo yokuThengisa eyonwabisayo: Nceda uthumele!
Emva kweveki enye, iziphumo bezininzi kubaxhasi bethu, ngenxa yoko sibashiye i-imeyile namhlanje ukubabulela.
Ukuzonwabisa kweVidiyo yokuThengisa: Uthumele, uDoug uyaSindiswa!
Ewe, abathengi bethu abangakhange benyuke beze epleyitini bafumana omnye umyalezo.
Vidiyo yokuThengisa eyonwabisayo: Khange uthumele, uDoug AKASINDISWANGA!
Ukubhengezwa: Ndingumnini zabelo kunye nomseki kunye nomsunguli weCompendium Blogware.
tags: kublogaisihlanganisiiphoneKhuthazoii-saasukuzibandakanya kwevidiyouhambo lwevidiyoiividiyo
Appirio Idibanisa iSalesforce kunye neFacebook
Yeka Ukushumayela iiNethiwekhi zoLuntu kwiiShishini
Kwaye ndicela uxolo ngokuvalwa :), Ndingomnye wabo bafanele ukuba babhalele I-Sigma Micro's Ecommerce Gurus-iblogi yeCompendium kwaye ngentloni andikabikho!.
Yintoni eza kuthatha ukuze upompe ezinye izithuba? Ndithetha oko ngokunyanisekileyo - ndingathanda impendulo yakho!